Ma jiro version MKV2VOB Mac. Haddii aad doonayso in aad qabato shaqo la mid ah ku Mac (Mountain Libaaxa ka mid ah), MKV2VOB wanaagsan kale Mac waa xoog leh lagula taliyey. Read More >>
Maqaalkani waa mid inta badan ku saabsan yahay waxa WMA, sida loo ciyaaro WMA on Mac, sida loo badalo WMA Mac la WMA Converter Mac, iyo sida loo edit files WMA la editor WMA ah. Read More >>
Baro waxa file FLAC yahay, sida loo ciyaaro files FLAC la FLAC ciyaaryahan Mac, sida loo badalo files FLAC la FLAC Converter Mac, sida loo edit FLAC la editor FLAC. Read More >>
Tilmaan-bixiyahan waxa aad ku tusi doona sida loo isticmaalo Converter mod ah u Mac si loogu badalo .mod (.moi) on Mac for loo maqli on iPod, iPhone, Lugood, Apple TV, iMovie iwm Read More >>
Hage Easy iyo talooyin sida in ay ku xidhmaan fiidiyo ugu Mac iyo soo dejinta video inay Mac u ciyaareed iyo / ama tafatirka (Mountain Libaaxa ka mid ahaa). Read More >>
Ma doonaysaa in loogu badalo FLAC in MP3 on Mac OS X, si aad u ciyaari karaa FLAC u ballaaran loo maqli karo ciyaartoy MP3 sida iPod iyo Lugood iwm? Haddii ay sidaas tahay, waxaad tahay qof nasiib badan halkan. Read More >>
Maqaalkani waxa uu inta badan ku sharaxayaa waa waxa Amr, iyo sida loo badalo Amr in MP3 on Mac OS X effortlessly, iyadoo Amr lagu kalsoonaan karo in MP3 Converter Mac. Read More >>
Ma doonaysaa in loogu badalo FLAC in regelingen Mac u gubanaya si CD ama soo degida galay Lugood? Waa hagaag, ma ahan adag tahay inay tan sameeyaan haddii aad isticmaasho FLAC si Converter regelingen Mac. Read More >>
Tani waa talaabada ugu hagitaan talaabo talaabo ay ku tusaan sida ay u badalaan M4V on Mac inuu ciyaaro iPod, iPhone, QuickTime, Lugood, Apple TV, iMovie iwm Read More >>
Hel xirfadle TS Converter u Mac si loogu badalo TS dhammaan qaabab video caan ah oo loogu badalo oo dhan videos in TS on Mac in hab fudud oo degdeg ah. Read More >>
Maqaalkani waxa uu ka jawaabaa su'aalaha la xiriira sidii ay u ka iPhone wareejiyo music inay Mac iyo sida loo ka iPhone wareejiyo music inay Mac. Read More >>
Sida loo rogo ama YouTube in regelingen Mac (El Capitan ka mid ah)
Si aad u soo saaro audio regelingen ka YouTube files on Mac, waxaan u isticmaali Video Converter u Mac, kaas oo u bedeli karaan YouTube videos in regelingen file ah oo maqal ah oo leh tayo wanaagsan. Read More >>
Ma waxaad doonaysaa app lagu kalsoonaan karo si lagaaga caawiyo in aad loogu badalo WebM in MP3 on Mac? Eeg dheeraad ah lahayn. Maqaalkani waxa uu ku siinayaa xal lagu qanci karo. Read More >>
Maqaalkani waxa uu diiradda saarayaa bixiya users jid oo sahlan si ay u gudbiyaan videos ka iPhone si Mac iyo hagaagsan videos ka Mac si iPhone. Read More >>
Sidee Waxaad ciyaari karo qaabab Video for Mac (Yosemite iyo El Capitan ka mid ah)
Badan oo ku saabsan caan ah oo caadi ahaan loo isticmaalo qaabab video Baro, sababaha ku guuldareystay loo maqli karo iyo sidoo kale xal lagu taliyey. Read More >>
Ma doonaysaa in ay SMS ka Mac soo diraysid? Maqaalkani waxa uu daboolayaa 2 qaybood: sida loo diro fariimaha qoraalka ah ee Mac labada telefoonada Android iPhone. Read More >>
Ka hor inta casriyeeyo si macruufka 7, weeyna u maleeyeen in aad dib xogta iPhone aad si aad Mac. Maqaalkani waxa uu kuu sheegayaa sida aad u gurmad oo dhan xogta iPhone si aad u Mac. Read More >>
Posted by Emma Shaw | 07.10.2015
Maqaalkani waxa uu kuu sheegayaa sida loo wareejiyo music inay iPhone aan Lugood ee ku Mavericks iyo Windows PC siyaabo kala duwan. Read More >>
Si music ka PC wareejiyo Mac, kaliya music aad iPhone, iPad ama iPod. Markaas iyaga nuqul aad Lugood on Mac. Read More >>
Nero waddaa on Microsoft Windows iyo Linux, nasiib darro ma jirto version Mac. Download this 'Nero u Mac "halkan xal. Read More >>
Posted by Alejandro Gallet | 07.10.2015